महिलाहरुको साना स्तन हुनुका फाइदाहरु – Krazy NepaL
महिलाहरुको साना स्तन हुनुका फाइदाहरु
November 10, 2020 873
बक्षस्थल महिलाको सुन्दरता र शरीरलाई कलात्मक बनाई दिएको छ । त्यसैले हरेक पुरुषको पहिलो नजर पहिला स्त-नमा नै पर्दछ । महिलाहरुको शरिरका आ’कर्षक अं’गहरु मध्ये स्त’न एक प्रमुख अं’ग हो । शरीरको बनावट अनुसार महिलाहरुका स्त-नका साइज हुन्छन जसले उनीहरुलाई सुन्दर देखाउछन ।
महिलाहरुको अन्य अ-ङ्गको तुलनामा स्त-नको चर्चा धेरै हुने गरेको पाइन्छ । स्वयम् महिलाहरु पनि आफ्नो स्त-नको आकारप्रति अत्यधिक सचेत हुन्छन् । उनीहरु आफ्नो स्त-नको आ-कार ठूलो वा सानो भयो भनेर निकै नै चिन्ता र चासो व्यक्त गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्ययन अनुसार केही महिलाहरु आफ्नो स्त-नको आ कार सानो भयो भनेर निक्कै त’नावमा हुन्छन् । तर सानो स्त’न भएर बेफाइदा भन्दा पनि फाइदा नै हुन्छ ।
साना स्त-न हुनुका फाइदा :
-साना स्त-न हुनेहरुलाई बु’ब्स लि’फ्टिङ टेप वा यस्तै स्त-नलाई रिसाइज गर्ने साधनको जरुरत नै पदैन ।
– तपाई लो–कट टप्स लगाएर मज्जाले बस्न वा सार्वजनिक स्थलमा जान सक्नु हुन्छ । ‘क्लि’वेज लुक’ को लागि पनि तपाईले कुनै चि’न्ता लिनु पर्ने हुँदैन ।
-सार्वजनिक स्थल वा यस्तै स्थानमा साना स्त-न हुने तपाईले छेडछाड वा हिं-साको सिकार कम हुनु पर्दछ । प्राय जसो ठूला स्त’न हुने महिलाहरु सार्वजनिक स्थलमा पुरुषबाट बढि पि’डित हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
-तपाइई ठूला स्त-न भएकी महिला भन्दा केही छिटो छरितो गर्न सक्नुहुन्छ, भि-डभाड अथवा अकालो ओरालो गदर्मा तपाईलमाई झण्झ-ट नहुन सक्छ ।
-तपाई ठूला स्त-न हुनेभन्दा धेरै आनन्दले सुत्न र मिठो निन्द्रा पाउन सक्नु हुन्छ । भियना विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरुले गरेको एक अध्ययन अनुसार साना स्त’न हुने महिलाको तुलनामा ठूला स्त-न हुने महिलाहरु सुत्ने कुरामा २४ प्रतिशत कम संवे-दनशिल हुन्छन् ।
-ठूला स्त-न हुने अधिकांश महिलालाई ढाड दु’ख्ने सम’स्या हुन्छ तर साना स्त-न हुने महिलाले यो द’र्द कम मात्रै अनुभव गर्न पाउँछन् ।
-स्त’न सानो भएमा तपाई ब्रा नलगाई पनि घर बाहिर निस्कन सक्नु हुन्छ । ब्रा नलगाउँदा पनि सार्वजनिक स्थानमा तपाईलाई कसैले नोटिस गर्दैन ।
-स्त-न सानो भएमा स्त-न धेरै गिला हुने र झोलिने अथवा हल्लिने चि-न्ता हुँदैन ।
– ठूला स्त’न हुने महिलाको तुलनामा साना स्त-न हुने महिलाहरु कपडाको छनौटमा कम सचेत बन्दा पनि हुन्छ ।
स्त-नलाई कसरी आकर्षक बनाउने ?
जबकी महिला सौन्दर्यकै एक हि-स्सा हो स्त-न । त्यसैले अनाकर्षक स्त-नले समग्र सौन्दर्यमा असर गर्छ । ग-र्भा-वस्था, हर्मो’नको उतार-चढाव र बढ्दो उमेरसँगै स्त’नको सौन्दर्य पनि फिका हुँदै जान्छ । यो प्राकृतिक प्रक्रिया नै हो ।
यद्यपि स्त-नको सौन्दर्य कायम राख्न सकिन्छ । यसका लागि अहिले विभिन्न विधि अपनाउने गरिन्छ । कृतिम तरिकाले पनि स्त-न सुडौ’ल बनाउन सकिन्छ । स’र्जिकल विकल्प पनि उपलब्ध छ । यद्यपी सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो, प्राकृतिक तरिका । प्राकृतिक विधीबाट स्त’न सु’डौल बनाउन सकिन्छ यो प्रभावकारी पनि हुन्छ ।
उन्नत र पुष्ट स्त नका लागि स्वा’स्थ्य पनि राम्रो हुनुपर्छ । शरीरलाई सहि पोश्चरमा राख्नुपर्छ । पोष्टिक भोजन नियमिन रुपले लिनुपर्छ । पुरा निन्द्रा लिनुपर्छ । मान-सिक रुपले शान्त रहेर खुसी हुने प्रयास गर्नुपर्छ । यसा साथै हातले गर्ने काम गर्नुपर्छ, जसले स्त’नको व्यायाम हुन्छ । स्त-नको म साज गर्नुपर्छ । यसले अविकसित वा सि’थिल स्त-न पुष्ट हुन्छ ।
स्त-नलाई आक’र्षक बनाउनका लागि केहि व्यायाम वा योगासन हुन्छ । त्यस्ता व्यायामलाई विधिपूर्वक अभ्यास गर्नुपर्छ । पुशअप जस्ता व्यायामले छाती क सिलो र आक’र्षक बनाउन सकिन्छ । यससँगै उचित साइजको ब्रा लगाउनुपर्छ । ब्रा को साइज सही हुनुपर्छ । जगिङ जस्तो व्यायाम गर्दा स्त’न झो-लिने हुन्छ यस्तो बेला स्पोर्ट्स -ब्रा लगाउनुपर्छ ।
– आफ्नो दुबै हातको बलमा शरीरलाई उठाउने । कुहिना सिधा बनाउने ।
– शरीरलाई भूँइ अर्थात सतहमा सुताउने र र हातको बलले उठाउने । यसो गर्दा शरीर, खुट्टाको भाग खुम्चाउनु हुँदैन ।
– पुशअप गर्दा केवल कुहिना मोड्नुपर्छ शरीरको अन्य भाग मो’ड्नु हुँदैन । शरीरलाई तल लाने र माथि उठाउने अभ्यास गर्नुपर्छ
। यस्तो अभ्यास निरन्तर २०-२५ पटक गर्नुपर्छ ।
– भित्ताबाट करिब डेढदेखि दुई फिटको दुरीमा उभिने । आफ्नो उचाइ अनुसार दुरी कम वा ज्यादा गर्नुपर्छ ।
– दुबै हात सिधा गरेर भित्तामा राख्ने ।
– अब शरीरलाई भित्तामा झुका’उने र उठाउने अभ्यास गरौं । यस किसिमको पुशअप ३५ देखि ४० पटक गर्नुपर्छ ।
– दुबै हातलाई कम्मरभन्दा पछाडि लाने र कुनै कुर्सी वा बेन्चमा लगरे अड्याउने । बसेको पोजिसनमा घुँडालाई थोरै मोड्ने ।
– अब हातको कुहिना मोड्दै शरीरलाई तल र माथि गराउने ।
– यो प्रकारको चेस्ट डिप्स १५ देखि २० पटकसम्म गर्नुपर्छ ।
– बेन्च वा कुर्सीमा बस्ने । कम्मर सोझो पोजिसनमा राख्ने । दुबै हातले एउटा बल समात्ने ।
– दुबै कुहिना र बल काँधभन्दा माथि उठाउने ।
कसरी मसाज गर्ने ?
– एउटा हातको ह’त्केला स्त’नको तल राख्ने । स्त’नलाई हातमा राख्न दिने र अर्को हातलाई स्तन’को माथि राख्ने ।
– अब दुै हातले गोलाकार घुमाउँदै मालिस गर्ने ।
– अब माथिको हात तल र तलको हात माथि राखेर मालिस गर्ने ।
कसरी रोक्ने सिथिलता ?
यसका लागि प्राकृतिक उपाय छ । जस्तो कि, योग, व्यायाम, मसा’ज । स्त नलाई सु डौल बनाउने आफ्नै किसिमको व्यायाम हुन्छ ।
१. व्यायाम गर्नुअघि स्पोर्टस् -ब्रा लगाउनुपर्छ, जसले प्रत्येक जम्प वा स्टेपमा स्त’नलाई कसिलो बनाउँछ ।
२. पिठ्युको बलले सुत्नुपर्छ, यसले स्त-नको मांसपेशीलाई लाई कसिलो बनाइराख्छ ।
३. शरीरको मोटोपन घटबढ, हर्मो’नल परिवर्तन आदि कारणले स्त-न ठूलो वा सानो हुनसक्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा सहि किसिमको ब्रा लगाउनुपर्छ ।
४. स्त’नमा चिसो पानी अर्था बरफले र गड्नु-पर्छ, जसले यसलाई सि थिल हुनबाट बचाउँछ ।
५. छातीको मांस’पेशीलाई बलियो बनाउनुपर्छ । यसका लागि पुश-अप राम्रो उपाय हो । नियमित रुपले पुशअप गरौं । सुरुमा धिमा गतिमा र विस्तारै तिव्र गतिमा पुशअप गर्नुपर्छ ।
६. उत्तानो परेर सुत्ने । दुबै हातमा डेढदेखि पाँच किलोसम्मको तौल (भार) लिएर उठाउने र राख्ने अभ्यास गरौं ।
Prevआँखाको सुरक्ष्याको लागि अत्यन्त लाभदायी ६ उपायहरु
Nextगणेश भगवानको दर्शन गरि आज कार्तिक २५ गते नोभेम्वर १० मंगलबार तपाइँको भाग्य कस्तो छ राशीफल हेर्नुस
ओलीको मिसन सफल, अब प्रचण्डको कुनै आबस्यक नपर्ने र नेकपाको अस्तितो समप्त हुदै